नारीप्रति नेपाली समाजको धारणा - धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका
प्रकाशित मिति: २०७०, २ चैत्र आईतवार ०६:२२
यतिवेला एक्काइसौँ सताब्दीले नेटो काटिसकेको छ । आज आएर मानिसले गर्ने कार्यहरु सबै जसो इलोक्ट्रोनिक साधनहरु कम्प्युटरदेखि मानिस जस्तै काम गर्न सक्ने रोवट इलोक्ट्रोनिक विद्युतिय मानिस समेत आविस्कार भैसकेको छ । तर आज आएर नेपाली समाजको नारीप्रतिको धारणा भने सदियौं पुरानो छ । नारीप्रति नेपाली समाजको धारणा कस्तो छ त ? यदि कुनै आमाको कोखमा कुनै गर्भ रहन्छ र त्यो आमाले छोरी पाउँछिन भन्ने कुरा खुल्न आयो भने उनि माथि हेला र दुव्र्यवहार शुरु हुन्छ । अझ कति ले त गर्भमै भ्रुण हत्याका लागि दवाव दिने गर्दछन । कतिपय आमालाई पेटभरी खान समेत नदिएर कडा परिश्रममा लगाउने गरेको हामीले देख्ने गरेका छौं।
अहिले पनि हाम्रो गाँउ समाजमा छोरा र छोरीका विभेद हुने गरेको छ । कुनै गर्भवती आमाले जब छोरी पाउछिन उनलाई सुत्केरी भएको बेला राम्रोसित स्याहार सुसार नगर्ने, बच्चालाई समे खानपिन पनि दिन रिस गर्छन । जब घरमा जन्म लिन्छिन । अनि उनको मनस्थितिमा यस्ता खालका शिक्षा दिइन्छ । नानी तिमी छोरी हो तिमीले कुचो लगाउनुपर्छ, भाडा माज्नुपर्छ, लुगा धुनुपर्छ, अरुले जे जे भन्छन् सहनुपर्छ, घरधन्दाको काममा सिपालु बन्नुपर्छ किनकी तिमी अरुको घरमा जानुपर्छ आदि इत्यादी वेकम्वा कुराले दिमाग पागल मात्र नभएर पुरै एकोहोरो बनाइन्छ । अब भन्नोस् यस्तो शिक्षाले नारी कसरी अगाडी बढ्ने यो देशमा तर छोरा जन्मियो भने के गरिन्छ तपाईलाई थाहा छ ? यदि नेपाली समाजमा छोरा जन्मियो भने उसको फुर्ति नै अर्को हुन्छ । तिमीले पढेलेखेर ठूलो मान्छे बन्नुपर्छ, जागिर खानुपर्छ, देश विदेश हेर्नुपर्छ, यो घर व्यवहार चलाउनुपर्छ, हामीलाई पाल्नुपर्छ भनेर टाउकामा टेकाउछन् तर अन्त्यमा छोरा बन्छन् ट्यापे र मुन्द्रे अनि भन्छ बाबु मरे पनि मरोस्, आमा मरेपनि मरोस् भनेर गाजासम्म तान्न पुग्छ । गाजाले त नछुने केटालाई तपाई भन्नोस् जाड, रक्सी त पानी पिए बराबर अब भन्नोस नेपाली समाजको छोराप्रतिको धारणा यहाँ आएर चकनाचुर भएर सिसा फुटेझैँ भयो । अब भन्नोस् एकजना बाबुलाई छोरा र छोरी हुर्काउन बराबरी दुःख हुने हैनर ? के छोरा अनि के छोरी जे पाएपनि एकजना आमालाई बराबरी प्रशव पिडा हुँदैनर ? के आमालाई ९ महिनासम्म पेटमा बोक्न छोरालाई सजिलो छोरीलाई अप्ठ्यारो हुने हुन्छर ? दुबै जे पए पनि बराबर अप्ठ्यारो होइनर ? के छोरी पाइलट बन्न सक्दिनन्र ? यदि बन्न नसक्ने भए दक्ष राणा कसरी बनिन् त पाइलट ? के त्यो पनि नेपाली समाजमा धेरै पहिले । अहिले त छोरा भन्दा छोरी धेरै बनिसके पाइलट । छोरा भन्दा छोरी धेरै बनिसके डाक्टर अन्य क्षेत्रको कुरै नगरौँ । डाक्टर र पाइलट त बने भने अरु क्षेत्रमा त के कम छन् नारी । आदर्श कै कुरा गरौँ न नारीको । जब नारी सान िहुन्छीन आमा, बाबा, दाजुभाइको सम्मान गर्छिन् । अलि ठुली बन्छिन विद्यालय जान्छिन गुरु बा, गुरु आमाको स–सम्मान गर्छिन । जब नारी दाम्पत्य जिवन सुरु गर्छिन् अनि उनी श्रीमान्, सासु, ससुरा, देवर, जेठाजु, नन्द, आमाजु साइनो अनुसारको सम्मान आदर सत्कार गर्ने कुरामा तल्लिन बन्छिन् । आदर – सत्कार मात्र कहाँ होर तिनीहरुको आदेश समेत पालना गरेर आफू सच्चा नारी भनेर चिनाउँछिन् । तर यो नेपाली समाजमा जब छोरा जन्मिन्छ तब हुन्छन् भिमसेन देवतालाई चढाएको बोका जस्तो तपाईलाई थाहा छ ? तपाई यदि भिमसेन देवताको मन्दिर नजिक जानु भएको छ भने याद गर्नोस् भिमसेनलाई चढाएको बोका काट्न पनि हुँदैनरे । जे खाएपनि त्यसलाई धपाउन हुँदैन देवता रिसाउँछरे । हो नेपाली समाजमा छोरीलाई जति शोषण गरेका छन् छोरालाई ठिक उल्टो बढि सुविधा दिएका छन् । किनकी भविष्यको पालनपोषण गर्ने पुजारी भनेर । साथीहरु बुढेसकालमा डोकामा हालेर भिरबाट फाल्न लगेको कथा त हामी सबैले सुनेकैछौँ । त्यसै ग¥यौँ भने खानु होला अनि जानुपर्छ छोरीको सरण अनि पर्छ छोरीलाई फसाद । सम्पत्ती जति छोराले ऐस गरेर सिध्याउने अन्त्यमा छोराले हेला गरेपछि सरण लिन जान्छन् । छोरी चेली भएको ठाउँमा अनि कचकच सहनुपर्छ छोरीले ज्वाइको । सम्पत्ती खानेबेलामा छोरा पालनपोषण गर्ने बेलामा म । यो विषयमा विवाद उत्पन्न भयो भने त ज्वाइछोरी नै पारपाचुके हुन बेर छैन । एकपटक छोरीलाई अंश दिने विदेक संसदमा पारीत गराउँछौँ भनेर साहना प्रधानजी कुर्लीरहनुभएको थियो । यो पछि आएर तिनले पनि कुरा बुझेछन् । यदि छोरीलाई अंश दिने विदेक पास भयो भने कम सम्पत्ती भएको गरिबका छोरी कसले विवाह गर्छ भन्ने कुरा सोचेर टाल टुल पारेर विदेक पास गर्न लगाउनुभयो । विदेक त पास भयो विवाह नगरी ३५ वर्ष माइतमा बस्नुपर्ने यदि अंश लिएपछि विवाह भए सम्पत्ती माइतीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने । छोराले चाहिँ ७ ओटी श्रीमती भित्र्याए पनि त्यहि बाबुको सम्पत्तीमा चइन गर्न पाइने तर छोरी बुढेसकालमा विवाह गर्दा पनि माइतीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने । हर्नुस् त यस्तो बाबाुको सम्पत्ती खानुभन्दा बरु गिटी कुटेर खान्छु भन्दै आफ्नो बाटो लागेका छन् चेलीहरु । आदरणीय पाठक वृन्द यो समस्या बुझि दिने कसले ? नेतालाई चुनाव नभएसम्म तेल लगाउन जनताको घर दैलोमा आउँछन् । चुनाव भएपछि हेल्मेट लगाएर कुर्सी भाच्न संसद भवन जान्छन् । यो विषयमा सोच्ने कसले ? राष्ट्रका हेपिएका नारीको मुद्धा उठाउने कसले ? अब हामीले सोच्ने बेला आएको छ । यदी नारी नभएको भए हामी पुरुषको जन्म समेत हुने थिएन । यदी नारीलाई अवसर दिने हो भने नारी आज सबै क्षेत्रमा अग्र पंत्तिमा उभिएर राष्ट्रलाई टेवा दिन सक्छिन् एक असल गृहिणीदेखि लिएर डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, समाजसेवी सबै क्षेत्रमा काधमा काध मिलाएर अगाडी बढ्न सक्छिन् । यो कुरा तपाई हामी तमाम बुद्धिजिवी सर्कलले बुझ्न सक्नुपर्छ । यदि हामीले नारीलाई स्थान दिन सकेनौँ भने आजको समाज कदापी अगाडी बढ्न सक्दैन । देश विकासको कल्पना गरेर सपना देख्नु व्यार्थ हुनेछ । आज हामीले देशको विकास गर्नुछ भने नारी पुरुष समान छन् । नारी पनि देशका लागि एक अंग हो । उनमा पनि हिम्मत छ, साहस छ, जोस छ, जाँगर छ, आँट छ भन्ने भावना राखौँ अनि मात्र देश विकासको गतिमा लम्कन्छ ।
२०७०, २ चैत्र आईतवार ०६:२२ मा प्रकाशित